Dzimba dzakawanda dzakaparadzwa nedutumupengo reCyclone Idai, uye vanhu vakawanda vakarasikirwa nehupenyu hwavo.
Mukuru wevashandi mukambani yeEconet Group, VaLovemore Nyatsine, vanoti vakakwanisa kuunganidza vagari vanosvika mazana matatu vakazvipira kubatsira mukuchenesa dzimba dzakakanganiswa nemvura, kugadzira migwagwa kuitira kuti chikafu chikwanise kusvika kunzvimbo dziri kure, pamwe nekuita mabasa akasiyanasiyana.
VaNyatsine vanoti kambani yavo yakapa vari kubatsira ava mbatya dzekuzvidzivirira vachiita basa ravo, pamwe nezvikwanisiro zvinosanganisira mabhara, mapiki nemafoshoro.
VaNyatsine vanoti vakakwanisa kuumba zvikwata zvine vanhu makumi masere zviri kushanda kwaMutsvangwa, kuKopa, nekuNgangu pari zvino.
Vanotiwo vachatora nguva vachishanda vari mumatunhu akakanganiswa aya sezvo vachada kuona kuti zvikoro zvakakanganiswa zvinodarika makumi mashanu zvakaparadzwa mumatunhu aya zvakagadziriswa vana vasati vadzokera kuchikoro.
"Basa riri kuno kuChimanimani neChipinge ibasa rakakura. Vanhu vachada pekugara, vana vanoda kuti vadzokere kuchikoro, nekudaro tiri kushanda nemapazi akasiyanasiyana kuti tikwanise kuti vana vakwanise kudzokera kuzvikoro, nekuti zvikoro zvinosvika kuma 53 zviri munzvimbo iyi zvakakanganisika," vanodaro VaNyatsine.
Kambani yeEconet Group iri kubatsirawo mukutakurwa kwechukafu nezvikopokopo, kutsvagwa kwevakatsakatika, pamwe nekuwaniswa kwemvura yekunwa yakachena pamwe nemishonga kuvanhu vakawirwa netsaona yeCyclone Idai kuChimanimani neChipinge.
Hurukuro naVaLovemore Nyatsine
Kanzura weWard 23 kwaMutsvangwa, kuChimanimani, VaJoel Dhumakwezu, vanoti vari kufadzwa zvikuru nerubatsiro rwavari kuwana kubva kukambani yeEconet Group.
VaDhumakwezu vanoti mushure mekubatsirwa nezvikwanisiro, basa ravo pari zvino rave rekuvhura migwagwa yakavharwa, pamwe nekuchenesa dzimba dzakasiya dzazadzwa madhaka netsvina nemvura yakanaya iyi.